3 Isitudiyo Sonwabu
Indawo ephezulu ekhanyiswe kahle, evulekile ngaphezu kwestudiyo sabaphrinti, enekhishi nendlu yokugezela (ishawa). Hlala engadini enokuthula enempilo eningi yezinyoni. Phakathi kweNottingham Road neRosetta futhi eduze kwezinsiza zasendaweni, izikole nezindawo zomshado.
I-Loft iyindawo eyingqayizivele futhi izivakashi zingasebenzisa indawo yesitudiyo uma kudingeka. Ihlukaniswe nendlu enkulu futhi iyiyunithi yangasese equkethwe ngokuphelele. Ikhishi, indawo yokugezela kanye nesitudiyo siphansi futhi igumbi lokulala eliphakeme nendawo yokuhlala ifinyelelwa ngezitebhisi eziphakeme ukusuka studio.
Ikhishi lifakwe isiqandisi, i-microwave, ihhavini elincane, iketela nendawo yomlilo. Izitsha, amabhodwe nezinto zokusika kunikezwa kanye "nekhofi langempela" kanye nemishini yekhofi edingekayo.
4.80(60 okushiwo abanye)
4.80 · 60 okushiwo abanye
Lesi situdiyo sisendaweni yangasese enezinkundla eziningi kanye nokubonwa okuvamile kwe-Reedbuck, i-Scrub hare kanye ne-Duiker. Inqwaba yempilo yezinyoni kanye nezikhathi ezithile ezithize ze-Midlands Dwarf Chameleon.
Indawo iyimfihlo, sikhona nokho ukusiza uma kudingeka.